Izindaba zemboni - Izindaba - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Uyichaza kanjani imali eshaja esheshayo yeshaja yefoni ephathekayo?
Emqondweni wabantu, ukushaja okusheshayo yishaja engakwazi ukushaja ifoni ephathekayo ngokushesha, iyashesha iba ngcono, empeleni, lokhu kuyiphutha, akukho mbono oyiphutha, lapho ukushaja okungcono, okusheshayo, kuchazwa ngale ndlela, kepha iqiniso alinjalo, emhlabeni luhlobo luni lweshaja olushaja ngokushesha?
Indlela engcono yokusebenzisa ishaja yezokuvakasha
Ishaja yezokuvakasha ivamise ukuba yithuluzi elinikeza amandla kudivayisi yokugcina.Ishaja isiguquli esimile esisebenzisa i-power-electronic alternating current (AC) ukuguqula amadivayisi e-semiconductor anezinga lamandla njalo nobuningi abe yimanje ngqo.
Kunezinkinga eziningi zokuphepha ezidinga ukubhekwa nge-adaptha yamandla
Manje ngokwakhiwa kwe-Intanethi, ama-adaptha kagesi amaningi axhunywe ezintweni eziningi zokusebenza.Ngokuthuthuka okusheshayo kwenkathi yezomnotho, amakhaya abantu anenqwaba yama-adaptha kagesi.
Ingabe i-adaptha yamandla iyayikhipha imisebe emzimbeni?
Abakhiqizi be-adaptha yamandla babheka imisebe njengokungcola okufihliwe, kepha ngaso sonke isikhathi kuthinta impilo yethu. Abantu abaningi banokukhathazeka okuthile ngemisebe evela kuma-adaptha kagesi.
Imfuneko yamabhodi wesifunda esezingeni eliphakeme
Ngokuthuthuka okusheshayo kweSayensi nobuchwepheshe eChina, ubuchwepheshe obukhula ngokwengeziwe buya buhlanganiswa nempilo yabantu.Sicelo nocwaningo lwensimu yebhodi lesifunda le-PCB liya ngokuya libanzi, okuwukuthi amabhizinisi amaningi azokhetha ukuphrinta kwawo kobuchwepheshe ibhodi lesifunda lemishini kagesi nemikhiqizo ehlobene nayo.
Uyini umehluko phakathi kwe-adaptha yamandla neshaja
I-adapter yamandla ngokuvamile ibhekisa ekuguquleni ama-mains ethu ama-laptops, omakhalekhukhwini, inkomba, ama-routers, amaswishi, njalonjalo ezintweni zikagesi ezidingekayo ku-dc noma ku-low voltage ac power supply, i-adapter yamandla yelaptop neshaja yefoni ephathekayo, kepha iningi elinye i-adaptha yamandla imane nje ingamandla kagesi.Yethula umehluko phakathi kweshaja ne-adaptha yamandla